Nahoana No Faly Amin’ny Fialàn’ny Governoran’i Michoacán Ny Olona Sasany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Jona 2014 4:51 GMT
Fausto Vallejo. Sary avy amin'ilay mpisera Twitter @EjeCentral.
Iray amin'ireo fanjakana ao Meksika i Michoacán de Ocampo izay miorina ao andrefan'i firenena. Efa imbetsaka ny Global Voices no nitatitra mikasika ny fiverimberenan'ny herisetra mampivarahontsana ao amin'ity faritra ity.
Amin'izany toe-javatra izany, azo antoka ny vaovao nivoaka tamin'ny 18 Jiona 2014 fa handao ny asany ny governora Fausto Vallejo. Ilay mpanoratra gazety Joaquín López-Dóriga no namoaka ny fanambarana voalohany tao amin'ny Twitter:
Nanamafy i Joaquín López-Dóriga fa hametra-pialàna izy noho ny antony ara-pahasalamana, ary efa nampilaza ny @ EPN, araka ny efa nolazaiko.
Mpisera Madame Déficit naneho ny heviny mikasika ny fametraha-pialàn'i Vallejo:
Andro izay nandrasan'ireo Meksikana marobe fatratra! Nandao ny governemantan'i Michoacán ilay tsy mahavita azy @faustovallejof (voahodidina olona mpanao kolikoly).
Mitovy amin'izany ihany koa, nilaza i Homme Virtuel hoe:
Ofisialy ihany, nandao ny asany ilay governoran'i #Michoacán tsy misy ilàna azy. Ireo namany sisa no andrasantsika, avy aty Jalisco.
Efa nitatitra ilay mpanoratra gazety teo aloha Carlos Loret de Mola fa nisy ny fihaonana voarakitra teo amin'ny zanaka lahin'i Vallejo sy ireo lohandohan'ny fikambanan-jiolahy, izay mety hisy fiantraikany hafahafa tokoa:
Voamarina ireo loharanom-baovao telo avy amin'ireo ambaratonga fara-tampony ao amin'ny kabinetran'ny fiarovana ny Filoha Enrique Peña Nieto: Hita niaraka tamin'i Servando Gómez Martínez “La Tuta” i Rodrigo Vallejo Mora, zanaka lahin'ny governoran'i Michoacan tao anatin'iray amin'ireo lahatsary nalaina tao amin'ny trano voaambin'ny Tempolin'ny Manamboninahitra Mpitaingi-Tsoavaly.
Rehefa nanao fanadihadiana amin'ny tetidratsy politika hitazonana an'i Fausto Vallejo eo amin'ny fitondrana i Loret de Mola nanipika hoe:
Nilaza tamin'i Joaquín López-Dóriga tao amin'ny Radio Fórmula ny governora Fausto Vallejo fa tsy hoavy hiasa mandritra ny andro vitsivitsy izy fa hanao fizahana ara-pahasalamana amin'ny tapaky ny volana Jiona. Mety ho fotoana mampanahy tokoa izany.
Tsy ny zanaka lahin'i Vallejo ihany no voasaringotra amin'ny raharaham-pikambanan-jiolahy, fa ny “lefiny” teo aloha ihany koa izay niasa ho Sekretan'ny governemantan'i Michoacán, araka ny filazan'iCiro Gómez Leyva [es]:
Izany no mampivoitra ny henatra eo amin'ny talen'ny fampielezan-kevitr'i Fausto Vallejo eo amin'ny toeran'ny governoran'i Michoacán, Jesús Reyna, izay indroa Sekretaran'ny governemanta tamin'izany fitondrana izany no governora vonjimaika mandritra ny enim-bolana, nosamborina izy ary efa very zo ara-politika noho izy voarohirohy miaraka amin'ny Mpitaingi-Tsoavalin'ny Tempoly.
Na voamarina na tsia ny fifandraisana ( tsarovy ireo andiam-baovao navoaka teto tanelanelan'ny 5 sy 8 Aogositra, mikasika ny fomba niezahan'i Reyna sy ireo “mpiara-miasa aminy” nandà ny fakàna an-keriny ilay lehilahy antitra mpiompy Joaquín Ponce de León), toa nandefa fambara ny Filoha Peña Nieto fa tsy ho tafavoaka mora foana ireo izay tsy mankatò ny baiko amin'ny fanenjehana ireo jiolahy.
Mikasika ny hoe ny filoha no nampandrenesin'i Vallejo mikasika ny fanapaha-keviny fa tsy ny mpifidy azy, Arih Uriel nilaza hoe:
Iza no nifidy an'i Fausto Vallejo? EPN sa ny mponina ao Michoacans? Ny filoha no nampandrenesiny voalohany ary avy eo tamin'ny alalan'nyTwitter ireo olom-pehezina, izany tokoa ve?
Mandritra izany, nanararaotra naneso ny fanambarana sy ny fisian'ny mpanjakan'i Espaina nitsahatra tsy ho mpanjaka intsony ao anatin'ny ora vitsy i Augusto Íñigo:
Tsy nandany fotoana amin'ny fijerena fifanojoan-javatra mampiahiahy intsony ireo mpiray tetidrasy fa tamin'ny andro nanaovan'ny mpanjakan'i Espaina sonia ny fametra-pialàny no nanasonia ny fametra-pialany koa i Fausto Vallejo.
Amin'izao fialàn'i Vallejo izao, tokony hanendry governora vonjimaika hisahana ny asan'i Vallejo mandritra ny ambin'ny fe-potoa-piasany ny Antenimiera mpanao lalàna.